Habakuk 3 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
3 Odiyifo Habakuk awerɛhow mpaebɔ: 2 O Yehowa, mate wo ho asɛm.+ O Yehowa, wo nnwuma ama ehu aka me.+ Ma ɛmmra wɔ mfe no mu! Ma ɛnna adi wɔ mfe no mu. W’anibere mu, kae wo mmɔborɔhunu.+ 3 Onyankopɔn fi Teman bae, na Ɔkronkronni no fi Bepɔw Paran+ so bae. Sela.*+ N’anuonyam kataa ɔsoro,+ na n’ayeyi hyɛɛ asase so mã.+ 4 Ɔhyerɛn te sɛ owia hann.+ Hann abien pue fi ne nsam ba, na emu na n’ahoɔden wɔ.+ 5 Ɔyaredɔm di n’anim,+ na ahohyehye di ne nan ase.+ 6 Ɔtew gyinae sɛ ɔbɛwosow asase.+ Ɔhwɛe, na ɔmaa aman ho popoe.+ Na mmepɔw a ɛwɔ hɔ daa dwiriw gui,+ na nkoko a etim hɔ fi tete no bɔɔ wɔn mu ase.+ N’akwan fi teteete. 7 Mihuu Kusan ntamadan wɔ ahohia mu. Na Midian+ asase so ntwamutam wosowee.+ 8 O Yehowa, nsubɔnten nti anaa; nsubɔnten nti na w’abufuw adɛw,+ anaa po nti na wo bo afuw?+ Wotenaa w’apɔnkɔ so,+ na wo nteaseɛnam yɛ nkwagye.+ 9 W’agyan ho ada hɔ.+ Asɛm a wɔaka no yɛ mmusua no ho ntam.+ Sela. Wode nsubɔnten paapae asase no mu.+ 10 Mmepɔw huu wo, na wɔn ho yeraw wɔn.+ Osuframa kɛse betwaam. Subun teɛɛm.+ Na ɛmaa ne nsa so kɔɔ soro. 11 Owia ne ɔsram gyinae+ wɔ tenabea kokuroo hɔ.+ W’agyan nam sɛ hann,+ na wo peaw hyerɛn sɛ anyinam.+ 12 Wode animka bɛfaa asase so. Na wode abufuw porow amanaman no.+ 13 Wufii adi sɛ wubegye wo man,+ sɛ wubegye nea woasra no no. Wububuu otitiriw fii ɔbɔnefo fie.+ Na fapem no ho daa hɔ kosii ne kɔn so.+ Sela. 14 Bere a wotu baa me so sɛ ahum sɛ wɔrebɛbɔ me ahwete+ no, wode n’ankasa akode hwirew+ n’akofo ti mu. Wɔn ani gyei sɛ wɔn a wɔkɔtɛw baabi mene ɔbrɛfo.+ 15 Wode w’apɔnkɔ faa po mu, nsu pii a ahohɔre no mu.+ 16 Metee no, me yam hyehyee me, na nnyigyei no maa m’ano popoe; me nnompe mu hodwowee,+ na me ho wosowee. Na meyɛɛ dinn twɛn ahohia+ da a ɔbɛba abɛtow ahyɛ ɔman no so no.+ 17 Borɔdɔma rengu nhwiren+ na bobe rensow aba; ngodua ho adwuma bɛyɛ kwa, na mfuw remma aduan;+ nguan bɛsã wɔ nguannan mu na anantwi asã wɔ ban mu.+ 18 Nanso me de, medi ahurusi wɔ Yehowa mu+ na m’ani agye me nkwagye Nyankopɔn+ mu. 19 Awurade Tumfoɔ Yehowa ne m’ahoɔden;+ ɔbɛma me nan ayɛ sɛ ɔforote de,+ na ɔde me bɛfa beae a ɛkorɔn.+
Hwɛ Dw 3:2 ase hɔ asɛm.